यस्तो छ मोटोपनको शिकार बनाउने पाँच कुरा, यसो गरे बच्न सकिन्छ | Rajmarga
मानिसहरु भन्ने गर्दछन् कि मोटोपनबाट छुटकारा पाउनका लागि मानिसमा मानसिक शक्ति आवश्यक हुन्छ । तर शोधकर्ताहरुका अनुसार यसो होइन। थाहा पाउनुस् त्यो पाँच कारण जुन मोटोपनलाई प्रभावित पार्ने गर्दछ ।
१. कतै माइक्रोब्स कम त छैन
जिलियन र जेकी जम्ल्याहा दिदीबहिनी हुन् । तर एउटीको तौल४१ किलोग्राम बढी छ। ट्वीन रिसर्च युकेको अध्ययनसँग आवद्ध प्रोफेसर टिम स्पेक्टर दुवै बहिनीमाथि विगत २५ वर्षदेखि नजर राखिरहेका छन् ।
उनी मान्दछन् कि दुवैको तौलमा देखिएको अन्तरको ठुलो कारण सूक्ष्म अर्गेनिज्म माइक्रोब्स हो, जुन आन्द्रामा हुन्छ । स्पेक्टर भन्छन्–हरेक पटक जब तपाई खानेकुरा खानु हुन्छ, तब तपाई हन्ड्रेड ट्रिलियन माइक्रोब्स पनि भोजन दिइरहनु हुन्छ, यस्तोमा तपाई कहिले पनि एक्लै खाना खानु हुँदैन ।
दुवै दिदीबहिनीको दिसा जाँच गरेपछि यस्तो पाइयो कि दुब्ली बहिनी जिलियनको शरीरमा अलगअलग प्रकारको माइक्रोब्स थियो । यही तौल बढी हुने जैकीको शरीरमा त्यति धेरै प्रकारका माइक्रोब्स थिएन।
करिब करिब ५ हजार जनामा यही पैटर्न देखेका प्रोफेसर स्पेक्टर भन्छन्–जुन व्यक्तिमा जति बढी प्रकारको माइक्रोब्स हुनेछ, उ त्यति नै दुब्लो हुनेछ, यही यदि तपाईको तौल बढी छ भने त्यस्को अर्थ यो हो कि तपाईको शरीरमा त्यतिप्रकारका माइक्रोब्स छैन, जति हुनुपर्ने हो ।
यस्तो अवथामा यदि तपाई हेल्दी डाइट (फाइबरले भरिपूर्ण खाना) खाने गर्नु हुन्छ भने तपाईको शरीरमा माइक्रोब्सका प्रकार बढ्न सक्दछ ।
ती खानेकुरा जस्मा फाइबर भरपुर हुन्छ–
–अन्नको बिउबाट बनेको खाजा
–फल, रसिलो फलजस्तै अंगुर, नस्पाती
–ब्रोकाउली र गाजरजस्ता तरकारी
–सिमी, बोडीजस्ता हरियो तरकारी
२ जीन आफैमा चिट्ठा हो
के तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ कि केही मानिसहरु खानपिनमा ध्यान राखेपछि पनि आफ्नो तौल नियन्त्रणमा राख्न सक्दैनन् । यही केही मानिसहरु केही पनि गर्दैनन् तैपनि मोटोपनको शिकार हुँदैनन् ।
प्रोफेसर सदफ फारुकी भन्छन्–यो एउटा चिट्ठाजस्तै हो, अब यो सार्वजनिक भइसकेको छ कि हाम्रो तौलको नियन्त्रणमा जीन्सको भूमिका पनि हुन्छ । र, यदि तपाईको जीनमा कुनै गडबडी छ भने मोटोपन बढाउनका लागि काफी हुन्छ ।
जीन्सले कुनै व्यक्तिको भोक, उसले कति खानुपर्छ र के खानुपर्छजस्ता निर्णयमा प्रभाव पार्दछ । तपाई कति चाँडो क्यालोरी खर्च गर्नु हुन्छ । यो पनि जीन्सबाटै तय हुन्छ । यसका साथै जीनले यो पनि तय गर्दछ कि हाम्रो शरीरले तौललाई कसरी झेल्दछ ।
यसप्रकारको जीन्सको संख्या कम्तीमा पनि १०० छ, जसमा एमसीआर४ जीन पनि समावेश छ। क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीका वैज्ञानिक मान्दछन् कि हाम्रो तौलमा तीन जीन्सको ४०–७० प्रतिशतसम्म असर पर्दछ, जुन हामी आफ्नो परिवारजनबाट प्राप्त गर्दछौ ।
यसो मानिँदै आएको छ कि एक हजारमध्ये १ जना व्यक्तिमा एमसीआर४ जीनको बिग्रेको स्वरुप हुन्छ । यो त्यो जीन हो, जसले तपाईको दिमागमा भोकलाई नियन्त्रण गर्ने र भोक बढाउने काम गर्दछ ।
यो जीनमा गडबडी भएका व्यक्तिलाई बढी भोक लाग्दछ । यसका साथै बोसोयुक्त भोजन गर्ने इच्छा पनि हुन्छ । प्रोफेसर फारुकी भन्छन्–वास्तवमा तपाई आफ्नो जीन्सका बारेमा केही पनि गर्न सक्नु हुन्न । तर केही मानिसका लागि जीन्स बुझेर त्यसलाई डाइट मेन्टेन र व्यायाम गरेर तौल नियन्त्रणमा राख्न सहयोग गर्दछ ।
३. कुन टाइममा के खाइरहनु भएको त तपाई ?
तपाईलाई त्यो पूरानो भनाइ याद होला, जसमा भनिएको छ कि बिहान खाना एउटा राजाले जस्तो, दिउँसोको खाना सामन्तको जस्तो र रातिको खाना एउटा गरिब व्यक्तिको जस्तो हुनु पर्दछ ।
ओबेसिटी विशेषज्ञ डाक्टर जेम्स ब्राउन भन्छन् कि हामी जति सुतेर खाना खानेछौ, हाम्रो तौल बढ्ने सम्भावना पनि त्यति नै बढ्नेछ ।
रात्रि अवस्थामा हामी कम सक्रिय रहन्छौ भन्ने विश्वास गरिन्छ, त्यसैले रातमा खाना राम्रोसँग पच्दैन । तर, वास्तवमा कुरा यो हो कि यसको सम्बन्ध हाम्रो शरीरको आन्तरिक बडी क्लकसँग हुन्छ । उनी भन्छन्–हाम्रो शरीरले रातको तुलनामा दिउँसो क्यालोरी पाचन राम्रोसँग गर्दछ ।
यही कारणबाट जुन मानिस शिफ्टमा वा विचित्र समयमा काम गर्दछन् । उनीहरुमा तौल बढ्ने समस्या बढी हुने गर्दछ ।
रातको समयमा हाम्रो शरीरले बोसो र चिनी पचाउनका लागि संघर्ष गर्दछ । त्यसैले तौल घट्ने वा बढ्नेबाट बच्नका लागि साँझ सात बजेभन्दा पहिला नै आफ्नो एक दिनको आहारको अधिकांश क्यालोरी खाइसक्नु पर्दछ ।
डाक्टर ब्राउनका अनुसार विगत एक दशकमा ब्रिटेनमा रातको खानाको औसत समय साँझ ५ बजेबाट बढेर१० बजे भएको छ र यसबाट ओबेसिटीको स्तरमा बढोत्तरी देखिएको छ। तर, अहिलेको समयमा कामको अलगअलग घन्टा र तनावपूर्ण जीवनशैलीका बावजुद पनि तपाई केही यस्तो काम गर्न सक्नु हुन्छ, जसबाट तपाईको तौल कम हुन सक्दछ।
डाक्टर ब्राउनका अनुसार ब्रेकफास्ट नगर्नु वा टोस्ट खाएर काम चलाउनु पनि बिल्कुलै ठिक होइन । यसको स्थानमा प्रोटिन र बोसोयुक्त भोजनजस्तै अन्डा, खन्नको टोस्ट खाँदा तपाईको पेट भरिएजस्तो लाग्नेछ ।
४. दिमागलाई हाल्नुस चक्करमा
बिहेवियरल इनसाइट टिमले सुझाव दिएको छ कि ब्रिटेनका मानिसहरु आफ्नो खानाको हिसाव राख्नमा निकै खराब छन् । बिहेवियरल साइन्टिस्ट ह्युगो हार्पर सुझाव दिन्छन् कि तपाई क्यालोरी गन्ने ठाउँमा आफ्नो खानपिनसम्बन्धी बानीलाई परिवर्तन गर्न सक्नु हुन्छ । उदाहरणका लागि यस्तो भोज्य पदार्थ नहेर्नु मानसिक शक्तिको बलमा त्यसलाई नखाने कोशिस बढी प्रभावी सावित हुन सक्दछ ।
यस्तोमा तपाई आफ्नो किचनमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक स्न्याक्सलाई हटाएर फलफूलको टोकरी राख्न सक्नु हुन्छ ।
यसका साथै टेलिभिजनसामु बिस्कुटको एउटा पूरा प्याकेट राखेर बस्नुस् । त्यस्तो सट्टा तपाई त्यति नै बिस्कुट एउटा प्लेटमा राख्न सक्नु हुन्छ, जति तपाई खान चाहनु हुन्छ ।
यसका साथै सफ्ट ड्रिङ्क्सको डाइट भर्सन अपनाउन सक्नु हुन्छ । र, चकलेट, बिस्कुटका साथै साँझ चिया पिउन बन्द गर्नुको साटो तपाई त्यसको मात्रा क मगर्न सक्नु हुन्छ ।
डाक्टर हार्पर भन्छन् कि यदि खानेकुराको मात्रामा ५ देखि १०प्रतिशत कम गर्ने हो भने मानिसहरुलाई यो थाहा नै हुने छैन ।
५. हर्मोन्सको के भूमिका छ ?
बेरियाट्रिक सर्जरीको सफलता मात्र सानो पेट बनाउनमा छैन, बरु यो त्यो हर्मोन्समा पनि परिवर्तन गराउँदछ, जुन पेटमा उत्पन्न हुने गर्दछ ।
हाम्रो भोकले हाम्रो हर्मोन्सलाई प्रभावित गर्दछ । र, यो खोज गरिएको छ कि ओबेसिटीको उपचारमा सबैभन्दा प्रभावकारी उपचार बेरियाट्रिक ट्रिटमेन्ट, त्यो हमोन्स बन्दछ, जुन हामीलाई यो महशुस गराउँदछ कि हामीलाई भोक लागेको छैन ।
तर, यो निकै ठुलो अपरेशन हो, जसमा पेटको साइज ९० प्रतिशत कम हुन्छ र यो त्यस्ता मानिसमा मात्र गर्न सकिन्छ, जसको बीएमआई कम्तीमा ३५ छ । इम्पिरियल कलेज लण्डनमा शोधार्थीहरुले आन्द्रामा त्यस्तो हमोन्स रचना गरेका छन् जुन यो सर्जरीपछि भोकमा परिवर्तन हुन्छ ।
यो अपरेशनबाट गुज्रेका विरामीलाई हरेक दिन त्यो हर्मोन्सको इन्जेक्शन दिइदैछ । डाक्टर ट्रिसिया टेन भन्छिन्–विरामी कम भोक महशुस गरिरहेका छन् र उनीहरु कम खाइरहेका छन् । यस्तोमा उनीहरुले २८ दिनमा २–८ किलोग्राम तौल घटाए ।
यदि यो औषधि सुरक्षित पाइयो भने यो रोगीमा त्यतिबेलासम्म प्रयोग गर्ने योजना छ, जबसम्म उनीहरुको तौल स्वास्थ्यका दृष्टिले ठिक हुँदैन । क्रिस्टी ब्रीवर/बीबीसी हिन्दी
Previous post: ​अविवाहित हुनुहुन्छ ? त्यसोभए जान्नुस् यी दश सपना देख्दा वैवाहिक जीवनमा कस्तो असर पर्छ ?
Next post: एक-दुई दिनभित्रै पार्टी एकताको टुंगो लाग्छ :अध्यक्ष दाहाल
हातको मात्र होइन, निधारका यी सात रेखा हेरेर पनि व्यक्तिको भूत, भविष्य र वर्तमान थाहा पाउन सकिन्छ